Bewazi yini ukuthi parsley kungenzeka futhi ewusizo hhayi kuphela ukudla, kodwa nokuba balusebenzise ukugcoba? Abantu abaningi bayazi ukuthi evamile Ogorodnaya parsley - liyinqolobane amaminerali namavithamini ohlwini okuyizinto C, PP, K. Futhi lufaka carotene, amavithamini B, retinol, nicotinic acid. Kungaba ukuhlukana emzimbeni ubuthi futhi imfucuza, ngoba iqukethe bioflavonoid. Parsley juice akuyona ngaphansi ocebile macro- futhi microelements. Parsley ubuso futhi uphelele, ngoba unekhono mhlophe futhi ukulungisa isikhumba.
Ake sibheke imikhiqizo ebusweni esekelwe parsley. Uhlu enjalo ingashiwo iso cindezela. Ngokuba ukulungiswa udinga 50 amagremu parsley abiliswe isigamu ilitha lamanzi cishe imizuzu engu-nanhlanu. Kulandelwa umhluzi epholile futhi, yebo, ukuhlunga. Ofakwe kulesi pads luhlobo ukotini emhlabeni imizuzu embalwa, beka ku nezinkophe avaliwe. Phinda inqubo izikhathi ezintathu noma ezine.
Parsley, abantu baqashwe ngendlela ukumnika, futhi ikuvumela ukuba balahle freckles nombala eseliphuphile. Ukuze wenze lokhu, oqoshiwe kweqembu elincane imifino, uligcwalise ngamanzi abilayo wasiqashisa yenza amahora ambalwa. Udinga ukusula ubuso izikhathi ezimbalwa usuku lonke.
Lotion ka parsley kubantu abane isikhumba ebucayi, ungakwazi silungiselele lokhu iresiphi: ukuxubana kufanele ochotshoziwe parsley, rose amacembe, sage omisiwe eshiya 1 tbsp. l., uthele herbal amanzi okuholela ingxube abilisiwe ke sokunika cishe amahora amabili. Sula onezinkinga ubuso elangeni, izikhathi okungcono eziningana (ezimbili noma ezintathu) ngelanga.
Ekhaya, ungakwazi futhi wenze kakhulu mhlophe ebusweni parsley. Ukuze wenze lokhu, lungiselela elangeni ezilandelayo: uhlanganise amabili wezipuni of juice Rowan, iparsley lemon, engeza ukuba okufanayo amane namamililitha likagologo. Sula lokhu ubuso uhlelo emini, izikhathi ezimbili noma ezintathu.
Parsley kwesithathu ukuhanjwa abantu nge isikhumba evilaphayo othambekele imibimbi. Inqubo echazwe ngezansi elangeni kuzosiza uyigcine zisesimweni esikahle. Ukuze wenze lokhu, usike iparsley mix it nge lime izimbali. Thela ezimbili izinkomishi zamanzi (hot), omunye isipuni ingxube ngezindleko zemithi engamakhambi. Sula isikhumba sakho ekuseni kakhulu lantambama ezimisa ikhambi elicwengekileyo.
Parsley ubuso ungakwazi excellently ingasetshenziswa njengendlela buso. Nge amafutha umphumela isikhumba esomile kanye evamile esifanelana okulandelayo: thatha parsley oqoshiwe noshizi kwenye etafuleni spoon, engeza ubisi kancane ugovuze kuze abushelelezi. Khona-ke wagqoka isifonyo, futhi ngemva ikota i hashaza ihora ngamanzi.
Kufanele futhi nilalele nemibandela isitoreji lotions enziwe siqu sakhe. Ngokuqhathaniswa izimonyo professional, bona awafani futhi zidinga kuphela lokushisa cool, okungase banikeze kuphela esiqandisini. Amade singalondoloza izakhiwo zabo ewusizo walabo lotions ukuthi zenziwa ngesisekelo utshwala - cishe amasonto amabili. Iziphungo kanye infusions zigcinwa ayisekho kunesonto.
Izilwane Tattoo okuyizinto?
Ezikhangayo Yemvelo Bryansk esifundeni